အခြား - မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက် (BRN)
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် [Asian Development Bank (ADB)]
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ) သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏တရားဝင် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွင်း ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေးနှင့် ၎င်းတို့ပြည်သူများ ဘ၀အရည်အသွေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့တွင် ရုံးစိုက်သည်။ (အေဒီဘီ) ကို ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင် ၆၇ နိုင်ငံတို့က ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ (အေဒီဘီ) က ချေးငွေများပေးခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများ ပေးခြင်း၊ ထောက်ပံ့ငွေ ဂရန့်များပေးခြင်းများ ပြုပြီး အထူးသဖြင့် အစိုးရများမှတဆင့် အစိုးရလုပ်ငန်းများသို့ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ တာဆန်းဆည် တည်ဆောက်ရေးသည် (အေဒီဘီ) ၏ "မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသအတွင်း စွမ်းအင်ဆက်သွယ် အသုံးချရေး စီမံကိန်းကြီး" Regional Indicative Master Plan on Power Interconnection in the Greater Mekong Subregion တွင် တခုအပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
ကိုလင်ကို လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (COLENCO Power Engineering, Ltd.) - ဆွစ်နိုင်ငံ
AF-Colenco Ltd သည် ဆွစ်နိုင်ငံ၏ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများတွင် ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင် အာရှဒေသတွင်လည်း အခြားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေသော ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မဲ့မိုး ကျောက်မီး သွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစက်ရုံသည်လည်း ဤကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများတွင် တခု အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီ၏ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၎င်းက "သဘာဝ ရင်းမြစ်များကို ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများဖြင့် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားနေပြီး၊ လူများ၏ ဘ၀အရည်အသွေး တိုးတက်စေရေးနှင့် တည်တံ့စေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အကြံပေး ၀န်ဆောင်မှုပြုနေခြင်း ဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ [Electric Power Development Company (EPDC)] - ဂျပန်နိုင်ငံ
တည်ဆောက်မှုအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကို ၀ဲကြီး၊ ဒါးကွင်းနှင့် တာဆန်းဆည်များအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးနေသည်။
FOSCE အင်ဂျင်နီယာ အကြံပေးလုပ်ငန်း (FOSCE Consulting Engineers) - ဂျာမန်နိုင်ငံ
ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ပြီး FOSCE အင်ဂျင်နီယာ အကြံပေးလုပ်ငန်းသည် အထူးသဖြင့် ကွန်ကရစ်ဆည်များအတွက် အကြံပေးမှု ပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဖိအားမြင့် သံမဏိပိုက်လိုင်း တွင် ကွန်ကရစ်အားဖြည့်နည်း (RCC-Roller-Compacted Concrete) ဖြင့် ဆည်များ တည်ဆောက်ရေးတွင် အထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိပါသည်။ ၎င်းတို့က ဖြစ်နိုင်ခြေ လေ့ လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ ကနဦး စမ်းသပ်မှုပြုခြင်း (Trial mix programme)၊ ကုန်ကျစရိတ် ခန့်မှန်းတွက်ချက် ပေးခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး နည်းနာ ဖော်ထုတ်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးသည့် အစီအစဉ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ရေး ဆွဲခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးအထောက်အပံ့ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
အီတလီယံ-ထိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Italian-Thai Development Public Co. Ltd) - ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်
အီတလီယံ-ထိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး (အီတယ်ထိုင်း) က ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အာရှနိုင်ငံအများတွင် လူနေအိမ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦကြီးများကို ဆောက်လုပ်နေသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီသည် အခြေခံအဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်သည့် ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီး လမ်းများနှင့် အဝေးပြေးလမ်းမများ၊ ရထားလမ်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဆည်များနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ၊ အပူငွေ့သုံး လျှပ်စစ်စက်ရုံများ၊ ဥမင်များနှင့် သတ္တုမိုင်းတွင်းများ ကို အထူးပြု လုပ်ဆောင်နေသည်။ အီတယ်ထိုင်း ကုမ္ပဏီသည် သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် ဟတ်ကြီးဆည်တည်ဆောက်ရေး အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာဆန်းစစ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ကန်ဆိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကုမ္ပဏီစု [Kansai Electric Power Co. (KEPCO)] - ဂျပန်နိုင်ငံ
ကန်ဆိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကုမ္ပဏီစုသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကုမ္ပဏီ ၉ ခု အနက် တခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများတည်ဆောက်ရာ၌ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးနေပါသည်။ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၅ ခုနှစ်အတွင်း၌ မြစ်ဆုံစီမံချက် ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှိ-မရှိ လေ့လာတိုင်းထွာရေးအတွက် တာဝန်ယူခဲ့ ပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်နှင့် မေခ/ မေလိခ ဆည်များ
ကိုရီးယား လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကော်ပိုရေးရှင်း [Korea Electric Power Corporation (KEPCO)] - ကိုရီးယားနိုင်ငံ
ကိုရီးယား လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကော်ပိုရေးရှင်း (KEPCO) သည် မြန်မာလျှပ်စစ်စွမ်းအား ကော်ပိုရေးရှင်း (MEPE) နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကွန်ရက်တည်ဆောက်ရန် ဒေါ်လာ ၁. ၄ သန်းတန် စာချုပ်တခုကို ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းများတွင် စွမ်းအင်စနစ် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ပေးရန်၊ အထွေထွေ ယန္တယားများကို စစ်ဆေးပေးရန်၊ မှားယွင်းနေမှုများကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန်၊ စွမ်းအင် ထပ်မံပို့ဆောင်ပေးမည့် relay စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ပေးရန်တို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်း စီမံကိန်းအရ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် လျှပ်စစ်ကြိုးတန်းများ သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ကြားထောက် substation များ တည် ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိသည်။ ၃-နှစ်ကြာ စီမံကိန်းကို ကိုရီးယားနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (KOICA) က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသည်။ KOICA က အခြားစီမံကိန်း ၂ ခုကိုလည်း ၂၀၀၁-၀၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၄-၀၅ ခုနှစ်များတွင် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကွန်ရက်လေ့လာမှုများနှင့် လျှပ်စစ် ပို့လွှတ်မှု စနစ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
မာလ်ကွမ် ဒန်စတန် နှင့် အပေါင်းပါများ ကုမ္ပဏီ (Malcolm Dunstan & Associates) - ဗြိတိန်နိုင်ငံ
မာလ်ကွမ် ဒန်စတန် နှင့် အပေါင်းပါများ ကုမ္ပဏီ (Malcolm Dunstan & Associates) သည် အင်ဂျင်နီယာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပေးဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းနှင့် ဖိအားမြင့် သံမဏိပိုက်လိုင်း တွင် ကွန်ကရစ်အားဖြည့်နည်း (RCC-Roller-Compacted Concrete) ဖြင့် ဆည်များတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်မှာ ၂၅ နှစ်ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်းတွင် (MD&A) ကုမ္ပဏီက RCC စီမံကိန်း ၁၀၀ ကျော်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါ သည်။ အမြင့် ၉ မီတာ (အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အနောက်တောင်ဖက် ထရူရို Truro အရပ်ရှိ New Mill) မှသည် ၂၃၀ မီတာ အမြင့် (မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိ တာဆန်းဆည်) လုပ်ငန်းများကို အကျယ်အပြန့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ ပမာဏအားဖြင့် ဆိုလျှင်လည်း 4000m3 (အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ဖက် နယူတွန် အက်ဘော့ Newton Abbot ဒေသအနီးရှိ ဟိုလ်ဘင်းမ် ၀ုဒ် Holbeam Wood) စီမံချက်မှသည် 8. 65 m3 ရှိ (တာဆန်းဆည်) အထိ တာဝန်ယူ ခဲ့ပါသည်။ (MD&A) ကုမ္ပဏီသည် အနောက်နိုင်ငံများရှိ RCC အားဖြည့် ဆည်အများစုတွင် ပါဝင်ပတ်သက် ဆောင်ရွက်နေ ပါသည်။
အမျိုးသား ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း [National Hydroelectric Power Corporation ] - အိန္ဒိယနိုင်ငံ
အမျိုးသားရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း (NHPC) သည် အိန္ဒိယအစိုးရပိုင် စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတခု ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် အများရှယ်ယာဝယ်ယူနိုင်သော ကော်ပိုရေးရှင်း တခုအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ရှယ်ယာဝယ်ယူနိုင်သည့် စနစ်ဖြင့် အရင်းအနှီးများ ရယူခွင့်ပြုထားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ အနေအထားအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၏ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီကြီး ၁၀ ခုတွင် တခု အပါအ၀င် ဖြစ်ပါသည်။ (NHPC) သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြည်တွင်းစီမံကိန်း များကိုသာ အာရုံထား လုပ်ဆောင်လေ့ ရှိပါသည်။ မကြာသေးမီက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွင်စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုမျှမက ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထမံသီဆည်နှင့် နီပေါ၊ ဘူတန်နိုင်ငံများတွင်လည်း စီမံကိန်းများ တိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိနေသည်။
နာမာဒါ လွင်ပြင်ဒေသတွင် ဆောင်ရွက်သည့် အင်ဒီရာ ဆာဂါစီမံကိန်း (Indira Sagar Project) တွင် (NHPC) က အထူး တပ်ဖွဲ့များသုံးကာ ပြည်သူများကို ခြိမ်းခြောက်၍ ၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှ မောင်းနှင်ထုတ်ခဲ့သည့် သာဓက ရှိပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ရေမထိန်းသိမ်းနိုင်တော့၍ ဆည်ကျိုးမည့် အရေးကြောင့် (NHPC) ကုမ္ပဏီက အများပြည်သူများကို ကြိုတင် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ရေလွှတ်ချခဲ့ရာ ရွာအများရေလွှမ်းမိုးခဲ့ရပါသည်။ ရွာသားများမှာလည်း အသက်လု၍ ပြေးခဲ့ကြရပါ သည်။ အင်ဒီရာဆာဂါ၏ မြစ်အောက်ဖက် ကီလိုမီတာ ၅၀ အကွာအဝေးရှိ ဥုမ်ကရစ်ရှဝါ ရေကာတာ (Omkareshwar Dam) ဒေသတွင်လည်း ပန်သီယာဂျီ (Panthiaji) ကျေးရွာသားများကို ၂၄ နာရီသာ ကြိုတင်အသိပေး၍ ၎င်းတို့၏အိမ်များ မှ နှင်ထုတ်ခဲ့ဖူးသည့် သာဓက ရှိပါသည်။
မကြာသေးမီ နှစ်များတွင် ၎င်းကော်ပိုရေးရှင်းက ဥရောပ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ အထောက်အပံ့များ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ Banca Monte del Paschi di Siena, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis, Société Générale and Standard Chartered စသည့် ဘဏ်များအပြင် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) တို့မှ အထောက်အပံ့ရခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် Coface, Export Development Canada and JBIC စသည့် ပြည်ပပို့ကုန် ခရက်ဒစ်ချေးငွေပေးသည့် ကုမ္ပဏီများမှလည်း ထောက်ပံ့ငွေများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ပါဝါ မရှင်း (Power Machines) - ရုရှားနိုင်ငံ
ရုရှားနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်သည့် ပါဝါမရှင်း ကုမ္ပဏီ (Power Machines) သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဇီဂျန်း ဖူချန်ဂျီယန်း ရေအားလျှပ်စစ် စက်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment နှင့် ဟတ်ကြီး ဆည် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းအတွက် စက်ယူနစ် ၈ ခု ကို ပေးအပ်ရန် မဟာဗျူဟာအရ ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
၀င်းဒ်ဖော စွမ်းအင်ဝန်ဆောင်မှု လီမိတက် (Windfall Energy Services Ltd.)
ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလင်းကျွန်း၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ထားသည်။